XOG: DF Soomaaliya oo wajahaysa cadaadis weyn oo siyaasadeed. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadiskii ugu sareeyey ee dhanka siyaasadda ah, waxaana hadda wajahaya daruuro siyaasadeed oo aysan si fudud uga guuleysan karin, maadaama ay garabkooda kabaxeen qaar kamid ah wakiilada caalamiga ah.
Madaxweyne Farmaajo oo shalay ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdiisa lagu dacweeyey dawladdaha Caalamka iyo wakiilada siyaasadeed ee dalka.
Mr. Farmaajo wuxuu muujiyey heerka ay kala joogaan wakiilada caalamiga ah, waxaana qodobada ugu waa weyn ee haysta ilaa hadda kamid ah kulamada Nairoobi oo ku ah caqabad weyn.
Wasaaradda Arrimaha dibada Soomaaliya ayaa lamariyey qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Soomaaliya, loogana codsaday Kenya in ay hakiso kulamada dalkeeda ka socda.
Cadaadiska ugu badan ayay hadda lakulmaysaa Xukuumadda Federaalka, waxaana uga imaanaya Mucaaradkeeda oo doonaya in ay wax kasta cadaadaan, gaar ahaana jihada siyaasadeed ee dalku aadayo doorashada dhaw.
Mustaqbalka Siyaasadeed ee Dawladda federaalka ayaa ah mid halis ah, waxaana la ogeyn waxa xaaladdu noqon doonto, maadaama xaaladdu ay kacsan tahay.
Dawlad Wanaaggu waa nidaam sugan oo ku qotoma arkaan iyo haykal dhisan oo adduunweynaha lagaga dhaqmo nooc kasta oo ay siyaasadda dalku tahay. Sida aan aqoontayda yar ku garanayo arkaantaasu waa:
1. Dastuur qaran oo la isla meel dhigtay oo lagu dhaqmayo.
2. Baarlamaan dalka sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa u dajiya.
3. Wasaarado iyo hayado dawladeed oo qodobbada dhismaha iyo horumarinta qaranka dajiya.
4. Shaqaale dawladeed oo qodobbadaas dawliga dardar galiya oo fuliya.
5. Maxkamado iyo xeer-ilaaliyeyaal dastuurka, sharciyada iyo qawaaniinta dhawra oo dhaqan galiya.
Haddii intaasi ay madax goboleedyada iyo madaxda federaalku toos u wada hirgalin lahaayeen laba cali maanta is ma qabqabsateen ee kuwan baa kala hagi lahaa oo lagu kala bixi lahaa. Haykalkaasu haddii aanu dhisnayn waxaa uu xaalku ku dambeeyaa talo maalmeed aan tayo lahayn iyo turaanturoodka siyaasadeed oo aan dhammaad lahayn.
Maxaa garashadaas u diiday madaxdan dalka dibindaabinaysa?
Kkkkkkk, sxb garashadaas waxaa u diidayo daciifnimada farmaajo iyo jaahilnimada khayrre, xalka kaliya ee maanta Na horyaalla waa ineey meesha ka baxaan farmaajo iyo kuwa aragtidaada gaaban oo uu ka mid yahay xasan khayrre.